कसरी आनन्दसँग सम्पर्क गर्ने ? | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more कसरी आनन्दसँग सम्पर्क गर्ने ?
भदौ १३ गते, २०७६ - ०८:४८
यौनसम्पर्कका लागि वातावरण बनाउन पाकक्रिडाले नै सहयोग गर्छ । कतिपय व्यक्तिले यौनसम्पर्क योनिमा लिंग प्रवेश गराएरै सुरु गर्छन्, जुन उपयुक्त होइन । सामान्य रूपमा भन्नुपर्दा, योनिमा लिंगको प्रवेश सुरु गर्नुभन्दा पहिले यौन उत्तेजना दिलाउन वा लिन गरिने विभिन्न किसिमका क्रियाकलापलाई प्राक्क्रीडा भनिन्छ । चुम्बन, शरीर तथा यौनांग सुमसुम्याउने वा चलाउने आदि क्रियाकलाप मार्फत उत्तेजना वृद्धि गराउन सकिन्छ । यसका साथै आनन्दका साथ यौनसम्पर्क गर्न तनाव वा चिन्ता मुक्त हुनु जरुरी छ । सहज वातावरणमा तनावरहित भएर मात्र यौनसम्पर्क गर्नुपर्छ ।कान्तिपुर साप्ताहिकबाट
भदौ १३ गते, २०७६ - ०८:४८ मा प्रकाशित